Banyere Anyị - Shanghai Shenyong Line Products Co., Ltd
Shanghai Shenyong specializes na emebe, mmepụta na ahịa nke akara gbakwasara electric agha mwekota. Ọ na-enye usoro nke ọrụ ahịa anyị dị ka echichi, nwughari, mmezi nke hoisting n'ibu ngwá na nwughari & mmezi nke electric akara ngwá, mmepụta na ahịa nke akụkụ, azụmahịa ize, cone okuku, na nhazi nke ụgbọala na-adọkpụ ngwa. The ụlọ ọrụ bụ ahịa gbakwasara ma n'ụlọ na mba ọzọ na-nyere na Class A ụlọọrụ nzukọ. Ọ specializes na mmepụta nke dị mfe na akwụkwọ electric na Telecommunication akara dabeere agha mwekota hank tupu-knotting usoro ngwaahịa. Anyị na ngwaahịa na-etinyere ọtụtụ ke Telecommunication, ike network, kpaliri.
Railway, na eriri-optic USB. Anyị na ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè, ike-machining, mfe arụnyere na ume ịzọpụta nke na-enye ohere maka kara na nke ndị ọzọ ụdị electric na Telecommunication agha clamps ike tụnyere.
The ụlọ ọrụ na-nyere na ala-nke-na-na-nkà na ngwá na technical talent mma, na-achụso ozi nkwupụta nke "àgwà mbụ, ịkwụwa aka ọtọ elu" na-akwado ndị enterprise mmụọ nke "ịdị n'otu & pragmatism, mgbasa & nraranye". Ọ na-eburu site ISO 9001: 2008 Standard nlezianya na-eme ka otu ugboro-elele dabeere ime ọnụego ruo 98% na ahịa 'afọ ojuju ọnụego ruo 100% site lezie Ụgha, na nkà mmụta sayensị management, ji ezi obi na ọrụ ma na-ejide n'aka na afọ ojuju. Anyị na ngwaahịa izute choro maka nwughari na-ewu ụlọ nke electric netwọk. Ka ọ dịgodị, na ụlọ ọrụ ga mma ngwaahịa na ọrụ mgbe niile iji na-egbo mkpa nke ndị na-esonụ mba omume, àjà ndị kasị mma hụ amị ọrụ ahịa anyị.
Address: Mba 85 ShenXu Road, Songjiang District, Shanghai, China